Dadaab Refugee Camps | Archive | News in Somali | 5
Home » Archives by category » News in Somali (Page 5)
Qarax Ka Dhacay Baydhabo Iyo Ciidamada Dowladda Oo Toogasho Ku Dillay Labo Ruux
Wararka naga soo gaaraya degmada Baydhabo ee xarunta gobollka Bay ayaa sheegay in saakay bartamaha magaalada uu ka dhacay qarax miino oo aad u culus, hasse ahaaatee la sheegay in uusan wax khasaare ah geysan. Sidoo kale wararku waxaa y intaa darrayaan markii uu qaraxu dhacay durbaba in ay ciidamada dowladda ee halkaa ku sugan [...]
Continue reading …	Qarax Xoogan oo Qasaaro kala duwan Geestay oo Saakay ka Dhacay Magaalada Baladweyne
Wararkii ugu danbeeyay oo an ka heleeno Magaalada Baladweyne ayaa waxa ey sheegayaan in halkaasi uu qarax ka dhacay qaraxaan ayaa waxaa la sheegay in uu ahaa mid xoogan oo qasaaro kala duwan soogaarsiiyay Ciidamada Dowlada Soomaaliya ee kusugan Magaalada Baladweyne. Wararka ayaa waxa ay intaasi kudareen inuu qaraxaan ka dhashay geerida sadex askari iyo [...]
Continue reading …	Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari Oo Maanta Guddoomin Doona Kulankii Ugu Horreeyay Ee Baarlamaanka
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii u horreeyay ku yeelanaya magaalada Muqdisho, maalin kadib markii ay doorteen guddoon cusub, iyadoo kulanka maanta lagu dhaarinayo xildhibaanno dhawaan la soo gudbiyay, markii ay horay dib u celiyeen guddigii farsamada. Kulanka maanta waxaa shir guddoomin doona guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Somalia Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, waxaana la filayaa [...]
Continue reading …	Labo Wiil Walaala Ahaa oo Lagu Dilay Xaafada Suqa Xoolaha.
Maalmihii danbe ayaa waxaa Dagmada Huriwaa kusoo badanayay dilal qorsheesan kaas oo loo geesto dadka rayidkaa ee ku dhaqan Dagmadaasi. Galinkii danbe ee shalay ayee aheed markii lagu dilay Dagmada Huriwaa gaar ahaan Xaafada Suuqa Xoolaha labo wiil oo walaala ah mid kamidc ah wiilashaan ayaa waxa la sheegay in uu Dalka dibadiisa dhawaan uu [...]
Continue reading …	Mudaaharaadyo kasocda Mombasa!
Xaaladamagaalada mombasa ee xarunta gobalka xeebta ayaa wali kacsanaan laga dareemayaaka dib markii shalay ciidamada dalka kenya ay ku toogteen magaaladani mombasa sheikh Cabuud Rogo oo caan ka ahaa magalada mombasa oolagu eedeyay in uu taageero siiyo Ururka al shabaab ee ka dagaalama gudaha dalkaSoomalia . Xalay ilaa saaka ayaa magalada waxaa laga dareemayaa jahwareer [...]
Continue reading …	Mahiga oo mudo uqabtay xiliga ay dhacayso doorashada madaxtooyada soona dhaweeyay Pro Jawaari
Ergayga gaarka ah ee QM uqaabilsan Arimaha Soomaaliya Mahiga ayaa soo dhaweeyay qaabkii ay udhacday doorashadii lagu doortay Gudoomiyaha cusub ee barlamaanka Soomaaliya Pro Maxamed Jawaari. Isagoo kahadlayay munaasabad lagu soo xirayay doorashada ayaa Dr Mahiga waxaa uu sheegay in waqti adag loo maray doorashadii ka dhacday Xarunta Iskool Polosia. “Waxay maalin kale oo aad [...]
Continue reading …	Qaxootiga soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga dalka Kenya sidee bey u arkaan doorashadii shalayto ka dhacday magaalada mugdisho ee lagu doortay gudoonka cusub ee baarlamaanka soomaaliya iyo kuxigeenadiisa.
Qaxootiga soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga dalka Kenya side bay u arkaan doorashadii shalayto ka dhacday magaalada mugdisho ee lagu doortay gudoonka cusub ee baarlamaanka soomaaliya iyo kuxigeenadiisa. ayadoo shalyto ay ahayd maalin taariikhi u ah dhamaanba umada soomaliyeed meelwalbo oo ay joogaan islamarkaana 20 sano kadib markii ugu horeeysay magaalada mugdsho lagu qabtay [...]
Continue reading …	Soomaalida qaxootiga ah ee ku nool magaalo ku taal dalkaas Sweden ayaa waxaa la sheegay inay soo wajahday cabsi iyo argagax.
Soomaalida qaxootiga ah ee ku nool magaalo ku taal dalkaas Sweden ayaa waxaa la sheegay inay soo wajahday cabsi iyo argagax ka dib markii loo geystay weeraro cunsurinimo oo is daba joog ah taas oo keentay inay qaar ka mid ah Soomaalidaas ay ka qaxaan magaaladaas halka kuwa ku hareyna ay ku jiraan dhuumasho iyadoo [...]
Continue reading …	Aqoonyahanada Digil iyo Mirifle oo si weyn usoo dhoweeyay Guusha uu gaarey Prof Maxamed Jawaarey Gudoomiyaha Baarlamaanka.
War saxaafadeed oo uu ku saxiixanaa Guddoomiyihii hore Jaaliyada Somalida dalka Gariiga Ilyaas Cali Xasan ayaa lagu sheegay in doorashada Prof. Jawaarey ay tahay mid usoo hooyatay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan Dowlada Somaliya oo haatan ka baxday KMG-nimadii ay kusoo jirtay mudada dheer. Qoraalkaan oo loogu tala galay Saxaafada yaa lagu sheegay in [...]
Continue reading …	Wararkii ugu Dambeeyay Doorashada Gudoonka Baarlamaanka
Maanta magaalada Muqdisho waxaa ka jirta xaalad ka duwan tii hore, waxaana aad loo adkeeyey amniga guud maadaama maanta la dooranaayo guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya. Doorashada Guddoonka Baarlamanaka sida Guddoomiyaha iyo labadiisa kuxigeen ayaa maanta dhacaysa magaalada, waxaana iminka la deraamaayaa diyaargarowga doorashada. Amniga guud ee magaalada aad loo adkeeyey Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowladda oo [...]
Continue reading …	Page 5 of 18« First‹ Previous34567Next ›Last »	Home